लन्डनमा नेपाली चेलीको रोदन : सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गर्दै सचेत रहन आग्रह - sambahak
चौथो पटक पनि ‘पोजिटिभ’ आयो कनिकाको परीक्षण
कोरोनाविरुद्ध अक्षय कुमारको २५ करोड सहयोग
Home प्रवास लन्डनमा नेपाली चेलीको रोदन : सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गर्दै सचेत रहन...
लन्डनमा नेपाली चेलीको रोदन : सामाजिक सञ्जालमा फोटो पोस्ट गर्दै सचेत रहन आग्रह
भक्तपुर। बेलायतको लन्डनमा बस्दै आएकी एक नेपाली महिलाले आफूलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको पुष्टि गरेकी छन्। कोभिड–१९ पोजिटिभ देखिएपछि सामाजिक अभियन्ताको कामसमेत गर्दै आएकी भगवती रानाभाट अस्पताल भर्ना भएकी हुन्। सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो फोटो र स्ट्याटस पोस्ट गर्दै उनले सबैलाई सचेत बन्न पनि आग्रह गरेकी छिन्।
उनले यो संक्रमण अत्यन्तै पीडादायी हुने उल्लेख गर्दै १३ दिनसम्म पनि अत्यन्तै पीडा भइरहेको बताएकी छिन्। उनले अरू सबै सचेत बनून् र यो पीडा अरूले भोग्नुनपरोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले नै यो जानकारी शेयर गरेको बताएकी छिन्।
लमजुङ तारकुघाटकी रानाभाटले लेखेकी छिन्– ‘१० दिनको सेल्फ आइसोलेसनपछि कोभिड–१९ सँग लड्दै छु। यो महामारी कति पीडादायक हुँदो रहेछ, आज १३ दिनसम्म पनि निको हुने छाँटकाँटै छैन। फेसबुकमा राख्ने सोच थिएन, कतै आफन्त अनि साथीभाइलाई थप भयावह बनाउला भन्ने लाग्यो तर सोचें सबैले सावधानी अपनाउन सक्नुहुनेछ। हजुरहरू सबैलाई विशेष सावधान रहन अनुरोध।’
शुक्रबारदेखि उनी लन्डनको ह्यारोस्थित नर्थविक पार्क अस्पतालको क्रिटिकल केयर युनिटमा उपचार गराइरहेकी छन्।उनलाई शुक्रबार घरैमा एम्बुलेन्स आएर अस्पताल लगेको बताइएको छ।
पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनी फागुन २५ गते दिउँसो लन्डनको भेन्यु फाइभमा आयोजित अन्तर्र्रािष्ट्रय नारी दिवस कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन्। त्यसको भोलिपल्टदेखि उनलाई उच्च ज्वरोले सताएको थियो। आजको समाचारपत्र दैनिकबाट ।
Previous articleलकडाउनमा के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन ? नियम उल्लंघन गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद र जरिवाना
Next articleगरिखाने मजदुरमा बढ्दै कोरोनाको चासो
वीर अस्पतालमा मृत्यु हुनेको संख्या दुई पुग्यो
खाद्यान्न भण्डारणका लागि भक्तपुरको १७ तले भवन प्रयोग गरिँदै
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न भक्तपुर नपा नगर कार्यपालिका निर्णयहरू
सूर्यविनायक नगरपालिकाद्वारा दैनिक ज्यालादारी मजदुरी गर्नेको घरदैलोमै खाद्यान्न पु¥याउने
कोरोना संक्रमणको डरले गाउँ पस्न नदिएपछि रुखमै क्वारेन्टाइन !
डक्टर कोरोना देखि डराउँदा भक्तपुरका यी युवा भने कोरोना विरुद्दको लडाइमा अग्र पन्तिमा
उत्तर प्रदेश सरकारले मानिसहरुमाथि नै छर्कियो हानिकारक रसायन